“အတွေးစလေးတွေ”: နောက်ကွယ်ကနေ ပံ့ပိုးစေချင် . . .
နောက်ကွယ်ကနေ ပံ့ပိုးစေချင် . . .
ဆရာတစ်ယောက်အတွက် သင်ကြားမှုမှာ အောင်မြင်ဖို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ သူများကိုပံ့ပိုးပေးကြမယ့်သူတွေဖြစ်ပေမယ့်လည်း သူတို့ကိုယ်တိုင်မှာလည်း သင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေရဖို့လည်း လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ ကိုယ်တိုင်မှာ လိုအပ်ချက်တွေ၊ မပြည့်စုံမှုတွေ ရှိနေရင် သူများကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။
ဆရာတစ်ယောက်အတွက် ရုပ်ဝထ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေဆိုတာကတော့ လူအများမြင်သာတဲ့ အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သူများတကာနဲ့တန်းတူ ၀တ်ဆင်လိုမှု၊ နေထိုင်လိုမှု၊ လူနေမှု အဆင့်အတန်း စတာတွေပါ။ ဒါပေမယ့် လူမမြင်ပေမယ့် အရာရောက်တဲ့ ပံ့ပိုးမှုတစ်ခုကတော့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့ ပါရမီဖြည့်ဘက်တွေဆီက နားလည်ပေးမှုပါပဲ။
ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ဆိုတာ အချိန်ပေးရင်ပေးသလောက် အနားယူချိန်ရှားပါးလှပါတယ်။ စာသင်ချိန်သာမက စာသင်ချိန်ပြင်ပမှာပါ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးနေရသူတွေဖြစ်လို့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်နည်းလှပါတယ်။ ဒါတွေအပြင် သင်ကြားမှုနည်းစနစ်တွေ၊ ကျောင်းသားစိတ်ပညာတွေ၊ သင်ရိုးညွှန်းတန်းတွေပြင်ဆင်နေရတာတွေကြောင့် အိမ်ထောင်ဖက်တွေအပေါ်မှာ တာဝန်မကျေတာမျိုးတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်ကြားရေးဆိုတာ ကျောင်းသားတွေရော၊ ကျောင်းသူတွေပါ တရင်းတနှီးရှိအောင် ကြိုးစားမှ ပိုထိရောက်နိုင်တာမျိုးပါ။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့ စိတ်ထားနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို အချင်းချင်းကတော့ နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပြင်လောကသားတွေဖြစ်တဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်တွေဘက်က နားလည်မှုလွဲမှားတာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
အဲဒီလို အနေအထားမျိုးတွေကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာ ဆရာ၊ ဆရာမတွေခမျာ သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကတစ်ဖက်၊ အိမ်ထောင်ဖက်ကတစ်မျိုးနဲ့ ဗျာများရပါတော့တယ်။ တစ်ဖက်ကိုမှ အနိုင်ပေးလို့မရနိုင်တဲ့ အရာတွေဖြစ်တာကြောင့် သူတို့ပဲ စိတ်ဆင်းရဲ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒီဒုက္ခမျိုးကို ပညာရေးလောကထဲကို ၀င်ကာစနဲ့၊ အိမ်ထောင်ကျကာစ ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေ ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်ဦးနှစ်ဘက်စလုံးအတွက် အကျိုးလုံးဝမရှိနိုင်တဲ့ အရာဖြစ်လို့ ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်တွေ အနေနဲ့ သတိထားသင့်လှပါတယ်။ ဆရာဆိုတာမျိုးဟာ သင်ကြားမှုအတွင်းမှာ သင်ကြားရေးကလွဲလို့ ကျန်တာဘာမှ ခေါင်းထဲမှာ မထည့်အားပါ။ ထည့်ထားရင်လည်း သင်ကြားမှု မအောင်မြင်နိုင်ပါ။
ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ ပညာရေးအတွက် ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ပါရမီဖြည့်ဘက်တွေကလည်း ထိုက်သင့်သလောက် ၀ိုင်းဝန်းကူညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မြန်မာ့ပညာရေး တိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် နောက်ကွယ်ကနေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးကူညီမှုတွေ ပေးကြမယ့် ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ပါရမီဖြည့်ဘက်တွေကိုလည်း အလေးတယူရှိသင့်ပါရဲ့နော်...
Posted by Han Kyi at 9:48:00 pm
ထာဝရ ကျောင်းသားကြီး . . .
ဟစ်တလာကို လွမ်းမိခြင်း . . .
ကျွန်းဦးသစ်ပင်များ . . .
ကြားရကြားရ နားဝမသက်သာ . . .မြင်ရမြင်ရ ရင်ဝမသက်သာ ....
ကောသလမင်းအိပ်မက် ၁၆ချက် . . .
သံဓိဋ္ဌာန် . . .
ဥပေက္ခာ ဘယ်လိုပြုရမယ် . . .
အခြေအနေတိုင်းတွင် အကောင်းမြင် . . .
မမေ့နိုင်သော . . .
ဘာလာပေးပေး မရချင်ဘူး . . . ဘယ်သူနဲ့မှ မလဲနိုင်ဘူး ...
လေးစား ဂုဏ်ယူ ...
ကိုငှက် အလွမ်းမပြေ . . .
သူငယ်ချင်းရေ . . .
ငါ . . .
အလွယ်တကူ တတ်ကြစေ . . .
အမှီ . . .
မဆုံဖြစ်ခဲ့သော . . .
ဘ၀ရထားပေါ်မှာ . . .
ခွက်သန့်လေးနဲ့မှ . . .